admin, Author at Sainpwar - Page2of 85
ရင်သားအကျိတ် နှင့် အနာကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ “ဆေးဘက်ဝင် စေတီဂမုန်း”….
ရင်သားအကျိတ် နှင့် အနာကို စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ “ဆေးဘက်ဝင် စေတီဂမုန်း” ”ဆးဘက်ဝင် စေတီဂမုန်း” ဦးစွာစေတီဂမုန်းပင်အကြောင်းပြောပြချင်ပါသည်။ ဂမုန်းဝါသနာပါသူများ စိုက်ပျိုးသည်။ စေတီအမည်ဖြစ်နေ၍တချို့စိုက်ကြသည်။ ပင်စည်က ဖေါင်းဖေါင်းရိုးတန်ရှည်ရွက်တွန့် မျိုးဖြစ်သည်စေတီပုံဖြင့်တူနေသဖြင့် စေတီဂမုန်းဟုခေါ်ကြသည်၊တချုို့က တပင်ရွှေထီးဟုလည်းခေါ်သည်။ စေတီဂမုန်း၏ထူးခြားချက်မှာ” ဥ” ပံသဏ္ဍန် ထင်ရသည့် ပင်စည်ဖြစ်သည်၊ ပင်စည်ကိုမြေမြှု တ်ထားပါက ထိပ်မှအတက်ထွက်ကာ အရွက်များထွက်လာပြီး ပင်စည်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးဖြစ်သွားသည် နွေရာသီတွင်
သွားတိုက်ဆေးဘူး အောက်ခြေ မှာရှိတဲ့ အရောင် တွေပါတဲ့ လေးထောင့်လေး က ဘာကိုမှ မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့
သွားတိုက်ဆေးဘူး အောက်ခြေ မှာရှိတဲ့ အရောင် တွေပါတဲ့ လေးထောင့်လေး က ဘာကိုမှ မသိနိုင်ပါဘူးတဲ့ သွားတိုက်ဆေးဘူး အောက်ခြေ လေးမှာ အရောင်ပါတဲ့ လေးထောင့်လေး ကို သတိပြုကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအမှတ်အသား ထဲမှာဆိုရင် အစိမ်း၊ အပြာ၊ အနီ (သို့) အနက် စတဲ့ အရောင်တွေ ပါတတ်ပါတယ်။ ဒါကို
ထမင်းချက်ခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်များ အိမ်ရှင်မ / အိမ်ရှင်ထီး 😃 များအတွက် အသုံးဝင်မဲ့ လက်တွေ့အသုံးချ နိုင်တဲ့ ဗဟုသုတပါ။ အိမ်ရှင်မ/ထီး များ အတွက် ထမင်းချက်ရာတွင် အရသာသာ မက ကျန်းမာရေး အဟာရဓါတ်တွေပါ မဆုံးရှုံး စေမည့် နည်းလမ်းလဲ လွယ်ကူစေမည့် ထမင်းချက်ခြင်း ၏ လျှို့ဝှက်ချက်များကို စုစည်း ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါသည်။
၁၃၈၃-ခုနှစ်၊မဟာသင်္ကြန်စာ ဟောစာတမ်းကြီး ၁၃၈၃-ခုနှစ်၊သြင်္ကန်စာ ဟောစာတမ်းကြီး ဇေယျတု မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှောင်းတခူးလ္ဆန်း၃ရက်၊ခရစ်နှစ်2021 ၊ဧပြီလ(14)ရက်(၊ဗုဒ္ဓဟူးနေ့) မြန်မာစံတော်ချိန်နံနက် ၅နာရီ၄၆မိနစ်၅၅စက္ကန်.အချိန်တွင် မဟာသြင်္ကန်ကျပါသည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂နှစ်ခုနှစ်၊နှောင်တစ်ခုလဆန်း(နှစ်ခုနှစ်၊နှောင်တစ်ခုလဆန်း(၄)ရက်၊ခရစ်နှစ်2021၊ဧပြီလ(15)ရက်( ကြာသပတေးနေ့)သည်မဟာသြင်္ကန် (အကြတ်ရက်)ဖြစ်သည်။ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၂ခုနှစ်၊ နှောင်းတခူးလ္ဆန်း၅ရက်၊ခရစ်နှစ်2021 ၊ဧပြီလ(16)ရက်၊(သောကြာနေ့)နံနက် ၉နာရီ၅၁မိနစ်၃၆စက္ကန့်တွင်မဟာသြင်္ကန်တက်ပါသည်။ ထိုကြောင်မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်၊ဦးတခူးလ္ဆန်းခုနှစ်၊ဦးတခူးလ္ဆန်း(၆)ခရစ်နှစ်2021၊ဧပြီးလ(17) ရက်၊စနေနေ့သည် နှစ်ဆန်း(၁)ရက်နေ့ဖြစ်၊ကောဇာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃-ခုနှစ် လက်ထက်ရက်မရှိ၍ …. ဗုဒ္ဓဘာသာ၊သာသနာတော် ဝန်ထမ်း ရဟန်းအရှင်မြတ်တို့မှာ မြန်မာသက္ကရာဇ်၁၃၈၃ခုနှစ်၊ဝါဆိုလပြည်ကျော်(၁)ရက်၊ ခရစ်နှစ်(2021)၊ဇူလိုင်လ(၂၄)ရက်၊စနေနေ့တွင်
ကျွန်မ သင်းသင်းစိုးMRTVကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် (၇)လပိုင်းကစပြီးအလုပ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ့်လိုပဲ အတူတူဝင်ကြတဲ့လူ​တွေ အများကြီးပါ။ ဌာန​တွေခွဲကြ​တော့ ကျွန်မက သတင်းဖတ်ရမယ့် ​နေရာကို​ရောက်ပါတယ်။ ဘယ်လူကြီးနဲ့မှလည်း မသိသလိုဘယ်လူကြီးမှလည်းမဖားခဲ့ဖူးပါ။ ယုတ်စွအဆုံး လက်​ဆောင်အ​သေး​လေးကစဘာလက်​ဆောင်မှ​တောင် မ​ပေးခဲ့ဖူးပါ။ သတင်းဖတ်တာအ​စောကတည်းကဝါသနာပါလားဆို​တော့အမှန်အတိုင်း​ပြောရရင်ရူးသွပ်တဲ့အထိ မဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ဖတ်ရင်းနဲ့ ကိုယ့်အလုပ်မှာ​ပျော်​မွေ့လာတယ်ချစ်လာတယ်။ ကိုယ့်နယ်​လေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်း​လေးများပါလာရင်​ဖတ်ရတာ ပိုပြီး​ပျော်တယ်။ သတင်းဖတ်တဲ့အလုပ်ကို​တော့​ဖေ​ဖော်ဝါရီလ ၉ရက်​နေ့က​နောက်ဆုံးအဖြစ်ဖတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မသည်CDMလုပ်တာ မဟုတ်ပါ
အော်ပြည်သူတွေရယ်အိမ်မှာထမင်းဝင်မစားလို့စိတ်ဆိုးတာတဲ့လားမျက်ရည်ပါဝဲတယ် အော်ပြည်သူတွေရယ်အိမ်မှာထမင်းဝင်မစားလို့စိတ်ဆိုးတာတဲ့လား မျက်ရည်ပါဝဲတယ် တစ်ရပ်ကွက်လုံးရှိသမျှဟင်းတွေထမင်းတွေအကုန်ထုတ် မစားရင်စိတ်ဆိုးမှာတဲ့ အာပူလျှာပူသည်ဦးလေးကြီးက ရှိသမျှအကုန်သောက်တဲ့ ဘယ်လောက်တောင်အာဏာရှင်မုန်းတီးနေတာလဲဗျာ တကယ်တော့ကျနော်တို့နိုင်နေပါပြီအားလုံးစည်းလုံးပြီးအနိုင်ပွဲကိုဆက်ထိန်းသိမ်းဖို့ပဲလိုတယ် Fighting အရေးတော်ပုံအောင်ရမည် Crd အောျပွညျသူတှရေယျအိမျမှာထမငျးဝငျမစားလို့စိတျဆိုးတာတဲ့လားမကြျရညျပါဝဲတယျ အောျပွညျသူတှရေယျအိမျမှာထမငျးဝငျမစားလို့စိတျဆိုးတာတဲ့လား မကြျရညျပါဝဲတယျ တစျရပျကှကျလုံးရှိသမြှဟငျးတှထေမငျးတှအေကုနျထုတျ မစားရငျစိတျဆိုးမှာတဲ့ အာပူလြှာပူသညျဦးလေးကွီးက ရှိသမြှအကုနျသောကျတဲ့ ဘယျလောကျတောငျအာဏာရှငျမုနျးတီးနတောလဲဗြာ တကယျတော့ကနြောျတို့နိုငျနပေါပွီအားလုံးစညျးလုံးပွီးအနိုငျပှဲကိုဆကျထိနျးသိမျးဖို့ပဲလိုတယျ Fighting အရေးတောျပုံအောငျရမညျ Crd
ရဲတပ်ဖွဲ့က ပလပ်စတစ်အိတ်တခုထဲခဲလုံးတလုံးနဲ့စာရွက်ထည့်ပြီး ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကြားထဲကိုလှမ်းပစ်ပေးလိုက်တဲ့စာလေးပါ….
ကင်းချထားတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့က ပလပ်စတစ်အိတ်တခုထဲခဲလုံးတလုံးနဲ့စာရွက်ထည့်ပြီး ဆန္ဒပြလူငယ်တွေကြားထဲကိုလှမ်းပစ်ပေးတယ်…. စာထဲမှာ `တိုင်ပင်နေကြတယ် လွတ်အောင်ပြေးကြပါ´ လို့ရေးထားတယ်… Edited – အခုချိန်မှာတော့ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာလေးဂရုစိုက်ပါ ကာကွယ်ပါ 💪🏻 အားလုံးဘေးကင်းကြပါစေခင်ဗျာ 🙏🏻 Generationz ကငျးခထြားတဲ့ရဲတပျဖှဲ့က ပလပျစတစျအိတျတခုထဲခဲလုံးတလုံးနဲ့စာရှကျထညျ့ပွီး ဆန်ဒပွလူငယျတှကွေားထဲကိုလှမျးပစျပေးတယျ…. စာထဲမှာ `တိုငျပငျနကွေတယျ လှတျအောငျပွေးကွပါ´ လို့ရေးထားတယျ… Edited – အခုခြိနျမှာတော့ဘာပဲ
သမီးလေးမကြယ်စင်အတွက် ဖခင်ဖြစ်သူရင်နာနာနဲ့ရေးတဲ့စာ တဦးတည်းသောသမီးလေး လမ်းပေါ်ထွက်တာ စိတ်မပူဘူးလား လို့ သူများတွေမေးရင်……သမီးကို စိတ်မပူဘူး … လို့ပဲ ကျနော်ပြန်ဖြေနေခဲ့တာ သမီးက သွက်တဲ့ကလေး …ထက်တဲ့ကလေး … ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ဖေဖေဂုဏ်ယူခဲ့ရတဲ့သမီးလေး … Gz လေးတယောက်မို့ … ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲမှာ သူစိတ်အားထက်သန်သလိုတထောင့်တနေရာက ပြည်သူနဲ့အတူ ရှိနေခဲ့တဲ့ သမီးလေး … ချစ်လွန်းလို့
“ နို်င်ငံတကာ အမျိုးသမီးရဲစွမ်းသတ္တိရှင်ဆု မဖြိုးဖြိုးအောင်ချီးမြှင့်ခံရ ”
“ နို်င်ငံတကာ အမျိုးသမီးရဲစွမ်းသတ္တိရှင်ဆု မဖြိုးဖြိုးအောင်ချီးမြှင့်ခံရ ” ကမ္ဘာတဝန်း ရဲစွမ်းသတ္တိရှင်အမျိုးသမီးတွေနဲ့ အဖွဲ့တချို့ကိုရွေးချယ်ပြီး အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ဆုတွေပေးအပ်နေတာမှာ ဒီနှစ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့တခြားနိုင်ငံတွေက အမျိုးသမီးတွေနဲ့အတူ မြန်မာနိုင်ငံက မဖြိုးဖြိုးအောင် ဆုရရှိပါတယ်။ ဖယ်ဒရယ်စနစ်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ တရားမ ျှတမှုရရှိရေး ကြိုးပမ်းနေတဲ့ မဖြိုးဖြိုးအောင်ဟာ မြန်မာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို အားပေးလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်သလို ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြတဲ့ မန္တလေးမြို ့ကနေရန်ကုန်ကို
“ကျမမှာ ဗိုက်ကြီးနဲ့ ကလေးတယောက်နဲ့”နင်တခုခုဖြစ်သွားရင် ငါရင်ကျိုးမှာလို့ မနေ့ညကတင် ပြောနေတာ……
“က်မမွာ ဗိုက္ႀကီးနဲ႔ ကေလးတေယာက္နဲ႔” “မေန႔ညကကို ေျပာေနတုန္းရွိေသးတယ္။ နင္တခုခုျဖစ္သြားရင္ ငါဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ၊ ငါ့မွာဗိုက္ႀကီးနဲ႔ ကေလးတေယာက္နဲ႔၊ နင္တခုခုျဖစ္သြားရင္ ငါရင္က်ိဳးမွာလို႔ မေန႔ညကတင္ ႏွစ္ေယာက္သား ည ၁၂ နာရီထိ ကင္းေစာင့္ရင္း ေျပာေနတာ…” လြတ္လပ္ေသာသတင္းမီဒီယာအျဖစ္ ရပ္တည္ေနရမႈသည္ ျမန္မာျပည္သူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ အသိအမွတ္ျပဳေထာက္ခံအားေပးမႈအေပၚတြင္သာ လုံးဝမူတည္ေနပါသည္။ ကူညီပံ့ပိုးလိုပါက ေအာက္ပါလင့္ကိုႏွိပ္ၿပီး ကူညီလႉဒါန္းႏိုင္ပါသည္။ Unicode “ကျမမှာ